War-murtiyeed: Ahlu-Sunna oo mar kale DF ku eedeysay inay u afduubantahay doorashada Galmudug – Hornafrik Media Network
War-saxaafadeed saqdii dhexe ee xalay ka soo baxay xaafiiska madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa mar kale lagu cadeeyey0 in Ahlu-Sunna Waljamaaca aysan kaalin ku laheyn geedi socodka dhismaha Maamulka Galmudug.
War-saxaafadeedka waxaa lagu sheegay in dowladda federaalka ay afduubatay dhismihii maamulkaas, dadka reer Galmudugna ay noqdeen kuwo marti ka ah dhismaha maamulkooda, iyadoo lagu xadgudbay nidaamka federaalka, dastuurka dalka iyo kan Galmudug-ba, isla markaana gabood fallo lagula ka cayo odayaasha dhaqanka Galmudug, sida lagu sheegay qoraalka.
“Maalinba maalinta ka dambeysa waxaa sii kordhaya faquuqa siyaasadeed ee dowladdu kula dhaqmeyso Ahlu-Sunna Waljamaaca iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf” ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay xaafiiska madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali.
Sidoo kale warkan ayaa lagu sheegay in musharaxiinta Galmudug ay horay go’aan uga soo saareen ka qeyb galka doorasho ay ku sheegeen macmal oo dowladdu ay ugu daneyneyso musharax gaar ah, sida qoraalka lagu yiri.
“Dowladda federaalka waa inay tix galisaa waxgaradka iyo saamileyda siyaasadda Galmudug, taladaas oo ah sidii ay wax ku dhismi lahaayeen Galmudug mid ahna ku dhismi laheyd” ayaa lagu yiri war-saxaafadeedkan.
Ugu dambeyntii waxaa lagu yiri qoraalkaan “dowladda federaalka hadey wax ka badali weyso sida ay wax ku wado, waxaan cadeynaynaa inago kaashaneyna dad reer Galmudug oo ay ugu horeeyaan odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka kale inaan guda gali doono dhismaha maamul loo dhanyahay, kaas oo aan ku soo dhisi doono si waafaqsan dastuurka qaranka iyo kan Galmudug-ba, waxaana cawaaqib kasta oo dhasha arintaas mas’uuliyadiisa dusha u ridan doona dowladda federaalka” ayaa lagu soo gaba-gabeeyey qoraalkan ka soo baxay Ahlu-Sunna Waljamaaca.